Gịnị mere anyị - AlorAir
Gịnị mere m mkpa a Dehumidifier?
Ọganihu na nkà na ụzụ agaghị na inupụ mmadụ na-atụ, ma bulie anyị mata nke mmezi. Nke a pụtara na a elu arụmọrụ dehumidifier nwere ike inyere ndị na-dehumidification nke ikuku, nakwa dị ka belata n'ọdịnihu mmezi-akwụ ụgwọ. Ka ihe atụ, ngafe mmiri nwere ike ime ka oké ọnụ mmebi nke Ọdịdị na mmiri nke a ụlọ.
Ngafe mmiri nwere ike ime na a onye ọrụ ma ọ bụ ndụ na gburugburu ebe obibi. Mgbe mbụ chere na a eke onu, anyị maara ugbu a na anyị nwere ike igbochi-emerụ mmetụta nke ngafe mmiri.
► Olee Ebe gabigara ókè Mmiri Si Bịa?
Dabere na ikuku okpomọkụ, ikuku nwere ike ijide a ụfọdụ ego nke mmiri na a vaporous ala. Mgbe ikuku cools, ike jide mmiri mbelata ya. Nke a pụtara na ikuku tọhapụrụ ngafe mmiri oyi elu, nke na-emepụta na dampness na odide anyị bụ ndị maara na.
► Ntak emi Họrọ Dehumidifiers maka gabigara ókè Mmiri?
* Structural Mebiri
Osisi owuwu bụ susceptible na ebu na ire ere. N'ime oge ebu na ire ere nwere ike ime ka mkpa, dị ka ya amaghị ala na mkpumkpu uzọ abua.
15% nke di ike osisi n'akụkụ na-mere site na ire ere na ebu. Nke a na-eduga ná banyere 20 ijeri ụkwụ nke osisi na-ebibi, nke bụ ihe karịrị ihe mebiri emebi site ọkụ.
Mputa mgbidi nwere ike mfe banye mmiri na ha na-ebupụta. Mgbe n'elu okpomọkụ na-ebelata ihe ndị ọzọ, ndị ọzọ mmiri na-etinye obi gị dum, na-eduga a jọgburu okirikiri.
Dehumidifier ga-wepụ oké mmiri si na gburugburu ebe obibi na-enyere na-ihe na a kwesịrị ekwesị iru mmiri larịị. Nke a na-enyere aka belata mmezi efu na na-na ebu mmebi na a kacha nta.
Corrosion nke metal-abụkarị n'ihi na nke ngafe iru mmiri. Ezinaụlọ eletriki ngwa na ọkụ mmiri ike na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ha banye ukwuu mmiri si na ikuku. Nri, ọgwụ, akwụkwọ, na uwe na-adịghị ike imebi na pụrụ ịghọ moldi si dampness.
Dehumidifier nwere ike inye a mbara ngwọta niile nke gị nchekwa nsogbu. Iji otu oru oma, ngwa ngwa na-eme AlorAir dehumidifiers ana achi achi na niile nke gị nwere na-ekwesị na-elekọta.
Dee mmiri na gburugburu ebe obibi bụ ukwuu mara mma ka pests, dị ka àkịkà, ndanda, na ọchịcha, mgbe mgbe, na-ebi n'ụlọ gị gị na dịghị ruo ogologo oge. Ndị a ajọ infestations nwere ike ime ka ọtụtụ mmebi n'ụlọ gị gị na ahụ ike.
Dehumidifier nwere ike mfe ịnọgide na-enwe a ala iru mmiri larịị gị ndụ na-arụ ọrụ ohere. Site ekesa akọrọ na ala ikuku, ị nwere ike ibelata ajọ infestation ma melite ikuku mma.
Ime ụlọ ikwu iru mmiri etoju nke 60% ma ọ bụ elu ga-ukwuu dịkwuo Ohere nke ebu, ebù, na fungi, nke na-amụba na osisi, unyi, katọn, na akwụkwọ.
Dị ka ebu na-agbasa, ọ tọhapụrụ ọtụtụ nde spores n'ime ikuku. Nke a na-eduga ná mgbọrọgwụ, na wetara odors, na mgbakwunye na-amụba ihe ize ndụ nke dị ize ndụ ahụ ike na ọnọdụ.
A dehumidifier nwere ike n'ụzọ dị irè ibelata ime ụlọ iru mmiri, mee ka gị na ndụ na gburugburu ebe obibi ihe ọma, na belata ohere oké njọ nke ọrịa.
Anyị n'Anya ka innovate!
AlorAir enye a usoro nke elu IAQ na dehumidification ngwọta site dehumidifiers, ikuku movers, ikuku scrubbers, na ihe ndị ọzọ. Anyị ọhụrụ ngwaahịa nwere ike ji mee ọtụtụ ngwa sitere na site ulo oru na residential. Anyị ozi bụ akwụsị innovating na ngwaahịa na anyị na-enye ndị ahịa anyị.
► Advanced Coils Mepụta High Cop
The coils on AlorAir dehumidifiers bụ buru ibu karịa coils nke a ot dehumidifier. Ọzọkwa, eriri igwe na nku azu imewe na-agụnye pụrụ iche atụmatụ a na-apụghị ịchọta na dị ọnụ ala karịa, uka na-emepụta dehumidifiers. The oversized eriri igwe na okpomọkụ Exchanger ike wepu 2-3 ugboro dị ka ukwuu mmiri kwa kilowatt ka a ot dehumidifier. AlorAir si ukwuu oru oma dehumidifier azọpụta ruo $ 250 kwa afọ na ume-akwụ ụgwọ na a ga a na-adịru 10+ afọ na a ise n'afọ ole na akwụkwọ ikike.
► epoxy uzuzu mkpuchi na Coils
Iji zere Freon leakage, a na-egbu egbu oghom maka a dehumidifier, AlorAir ka ẹkenam epoxy ntekwasa coils. Nke a otutu feature gbatịrị ndụ nke coils site n'inye nchedo corrosive gburugburu na ịnọgide na-eriri igwe okpomọkụ transferability. Ọzọkwa, elu arụmọrụ rotary Compressor ana achi achi kacha irè na kasị ala-ekwe omume na-eri.
► Nrụgide oru ghọọ mmanụ nfuli
Nfuli-emekarị nwere oké njọ mbipụta dị ka ekpo oke ọkụ, nchọpụta ọdịda, na rusting. Luckily, anyị injinia mepụtara a mgbapụta ahụ bụ ihe ndị ọzọ a pụrụ ịdabere na. Na a 20 'n'ibuli dịtụ anya, ghọọ mmanụ na-enye gị nnwere onwe na-igbapu n'ebe ọ bụla.
All Gịnị na AlorAir si ghọọ mmanụ nwere ngwa Jikọọ plọg. Nke a na-eme ka echichi na mmezi ngwa ngwa na mfe.
► Ndenye Access ka esịtidem Components
All AlorAir dehumidifiers enye mfe nnweta esịtidem mmiri. The Oké Ifufe Series nwere a okpokoro akịrịkọ cover mgbe Sentinel Series na-onwem na ohere ogwe. Ke adianade do, mgbapụta nwere ngwa Jikọọ Gịnị, n'ihi ya, ọ ga-adị mfe wepụrụ na-enweghị ịnweta akara osisi.
► Remote Control Humidistat
Anyị remote humidistat eme AlorAir dehumidifiers ezigbo oke, mgbe unit ga-ducted n'ime ọzọ ụlọ. The humidistat na-atụmatụ nhọrọ duct n'ịnyịnya flanges, nke belata echichi oge mgbe ejikọta a ducting usoro.
► mmetụta na uzo Air Design
All AlorAir dehumidifiers agụnye a iru mmiri mmetụta na uzo Air Design, nke na-egbochi obere ịgba ígwè. Sensọ nwere ike mfe na-emetụta esịtidem okpomọkụ ma na iru mmiri, na-eme ha ewekarị anata na-ezighị ezi n'ókè-ike ma ọ bụ gbanyụọ. N'aka nke ya, nke a ebelatakwa oge lifespan nke Compressor na-eme ka ndị refrigerant usoro ejighị n'aka. Mbuso a nke, na uzo Air Design-enye ohere ihe mmetụta na-kpamkpam gwara mmanụ si esịtidem okpomọkụ na iru mmiri.
► ọ bụla ghara imeri Main Board Performance
Isi osisi pụrụ ime nnọọ emetụta arụmọrụ nke gị dehumidifier. N'ihi nke a, ihe niile AlorAir sekit mbadamba na-ntekwasa maka nchebe. The osisi bụ tamper àmà na-eguzogide ọgwụ magnetization. The akụkụ na arụmọrụ nke ọ bụla osisi na-100% na-anwale.
► Ductable Unit-eme Ka Ndụ Gị Mfe
The AlorAir ezinụlọ dehumidifiers awade ngwa maka a dịgasị iche iche nke ngwa. The duct ngwa iwu ekwe nkeji-enịm ke a na n'ime ime obodo ebe, dị ka a n'ibu ụlọ, na-achịkwa site ọzọ ụlọ ke ufọk. Na ụfọdụ ngwa, a na n'ime ime obodo humidistat nwere ike ịdị mkpa.
Olee Otú AlorAir Save Ị Ego?
Ịchịkwa iru mmiri etoju ke n'ụlọ gị gị na bụ isi ihe na-echebe gị n'ụlọ, ahụ ike, na ndị ezinụlọ. An AlorAir dehumidifier bụ ihe oké ọnụ ngwọta gị iru mmiri nsogbu. The mbụ ulo oru mbo ke elu ime ụlọ ikuku quality nwere ike natara mgbe a afọ ole na ole nke ume ego.
The elu Cop nke AlorAir si dehumidifiers pụrụ ịzọpụta gị ruo $ 250 na ume-akwụ ụgwọ tụnyere ot dehumidifiers. An AlorAir dehumidifier ga a na-adịru 10+ afọ na-abịa na a ise n'afọ ole na akwụkwọ ikike. Nke ahụ bụ a na atumatu olu ego niile metere site na mbenata ntụ oyi mmefu. Ozugbo ị na-enwe ike ịnọgide na-enwe a na-agbanwe agbanwe ikwu iru mmiri nke 50% ma ọ bụ na-erughị, gị HVAC agaghị na-arụ ọrụ ka ike na-a ọma na okpomọkụ.
Gị ego na ihe AlorAir dehumidifier ga-bụghị naanị inye ume ego ma, ọ ga-ike a ihe ọma na ike ndụ ohere.
New Uzit Re-zigaara
AlorAir si bundled ngwaọrụ maka mweghachi na ihicha:
Ịchọta ngwọta kasị mma pụrụ ịdị mgbagwoju anya ma na-agbagwoju anya n'ihi na na-enweghị uche na-azụ ahịa. AlorAir azụlitewo multiple NYEGHACHI nchịkọta to:
1. Weghachi mmiri mmebi
2. Speed ​​ebu remediation
3. Gbutuonụ mgbe-iju mmiri mmezi ụgwọ